Facebook မှာ-,fInstagram ကို
ဟေတီသည်၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုများရှိခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဟေတီမှာအလားအလာရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျယ်ပြန့်လြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြ!
ကြီးထွားမှုဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသော Creole စကားလုံးမှ Kwasans တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟေတီလူမျိုးများ၏စွမ်းအားနှင့်စွမ်းအင်ကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်ကူညီပေးသည်။ ဤလှပသောကျွန်းနိုင်ငံတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့၊ မိသားစုများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘ ၀ ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်စမတ်ကျသော၊ လုံ့လဝီရိယရှိသောလူများနည်းပါးသည်။ ချို့တဲ့တာကအရင်းအနှီးပါ။ အခြေခံအဆောက်အအုံ။ ပညာရေး။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။ အခွင့်အလမ်း။ စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရရန်စည်းစိမ်ချမ်းသာကို enable သောသူတို့ကိုအရာ။
သင်၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများသည်မြေဆီလွှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ မျိုးစေ့များစိုက်ပျိုး။ Haitians ကူညီ Haitians Empowering ။
သင်ကဲ့သို့သောဂရုစိုက်တတ်သောလူများ၏ရက်ရက်ရောရောထောက်ခံမှုမပါဘဲဟီတီလူမျိုးများကိုကူညီခြင်းအားဖြင့်ဟီတီလူမျိုးများအားကူညီခြင်းများကို Kwasans က ဆက်လက်၍ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီလှပတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့အရင်းအမြစ်ကောင်းပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုဒီကိစ္စကိုလှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Kwasans တက္ကသိုလ်၏ Notre Dame Haiti နှင့်ရေရှည်ပေါင်းသင်းမှုအတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ လက်ရှိဟေတီအဖွဲ့အစည်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်အတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ ဟေတီလူမျိုးများသည်သူတို့၏နိုင်ငံသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုအကောင်းဆုံးကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားမိသည်။
Kwasans ဖောင်ဒေးရှင်း၏အဓိကဆောင်ရွက်ချက်များမှာ -
LYMPHATIC FILARIASIS (LF) CLINIC - ချက်ချင်းအသနားခံခြင်း!
ဟေတီတွင်တစ်ခုတည်းသော Port-au-Prince အနီးရှိဤဆေးခန်းသည်၎င်းတို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုလိုအပ်နေသည်။
ဟေတီတွင်ဘောလုံး (ဘောလုံး) သည်လူကြိုက်များသည်။ Kwasans FC သည်ဟေတီ၊ လီယိုနာရှိလူငယ်ဘောလုံးအစီအစဉ်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အခြားအထောက်အပံ့များပေးသည်။
Kwasans FC အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်နှိပ်ပါ!
Kwasans Foundation သည်အမြတ်အစွန်းမယူသော၊ ၅၀၁ (ဂ) (၃) ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ သုည overhead နှင့်အတူ 100% မင်းရဲ့လှူဒါန်းမှုတွေဟာဟေတီလူမျိုးတွေကို
Haiti ဆေးရုံ St. Croix
သတိပေးချက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဓါတ်ပုံများသည်ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးကန့်ကွက်လျှင်စိတ်မကောင်းပါ၊ သို့သော်ဟေတီနိုင်ငံ၌ပြproblemနာ၏ပြင်းထန်မှုကိုသရုပ်ဖော်ရန်ထိုအခြေအနေများ၏သက်ရောက်မှုကိုမြင်ရန်လိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကဏ္ fac တိုင်း၌ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတွေ့မြင်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာဟေတီလူမျိုးများကိုအကျိုးပြုမည့်ဟေတီအဖွဲ့အစည်းများကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနှင့်နည်းပညာများကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အနေဖြင့်ဟေတီပြည်သူလူထုသည်သူတို့၏ဘ ၀ တိုးတက်စေရန်နှင့်အနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပိုမိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
Clarence ၏ "Earl" Carter က၏ Memory ၌တည်၏
Earl သည် Lymphatic Filariasis နှင့် Iodine Deficiency Disorders ၏တားဆီးကာကွယ်မှုများမှတစ်ဆင့်ဟေတီပြည်သူများကိုကူညီရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ ခရစ်တော်၏နာမ၌သန့်ရှင်းသောလက်ဝါးကပ်တိုင်အသင်းတော်နှင့်အတူအမှုဆောင်ခဲ့သောသူ၏ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲကြိုးပမ်းမှုများသည်သန်းနှင့်ချီသောသူတို့၏ဘ ၀ နှင့်လူမျိုးတစ်မျိုး၏လမ်းစဉ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဤဗီဒီယိုတွင်ဟေတီ၌ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပံ့ပိုးသောဆားစက်ရုံ Bon Seliti အကြောင်းသူပြောခဲ့သည်ကိုကြားပါ (၁း၄၁ မှစတင်)
Earl ၏မှတ်ဥာဏ်ကိုသင်မည်သို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ကျေးဇူးပြုပြီး Kwasans ကိုဟေတီပြည်သူလူထုအတွက်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်ကူညီပေးပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကိုသိသည်! ဟေတီပြည်သူလူထုအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလုပ်ဆောင်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လစဉ်နောက်ဆုံးသတင်းများရယူရန်စာရင်းသွင်းပါ။
မူပိုင်ခွင့်ကို ၂၀၂၀ | Kwasans.org သီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒ | စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ